ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားဖျောဆောငျရာ၌ NCA လမျးကွောငျးပျေါတှငျသာ လြှောကျလှမျးရနျလို » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ပါတီစုံဒီမိုကရစေီခတျေကာလ ငွိမျးခမျြးရေးစတငျဖျောဆောငျစဉျကပငျ နိုငျငံတျော၏ ပကတိလိုအပျခကျြ ဖွဈသညျ့ တို့တာဝနျအရေးသုံးပါးနှငျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီစနဈတှငျ လိုကျပါလုပျဆောငျရနျ အခကျြနှဈခကျြကို ကမျးလှမျးခဲ့ကွောငျး၊ ယငျးကမျးလှမျးခကျြကို တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားမှ သဘောတူလကျခံပွီး နိုငျငံတျောအစိုးရ၊ တပျမတျောနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားက အကွိမျကွိမျဆှေးနှေးပွီးမှ NCA ကို လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြား ဖျောဆောငျရာ၌ NCA လမျးကွောငျးပျေါတှငျသာ လြှောကျလှမျးရနျလိုအပျကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အရှအေ့ာရှအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr.Sun Guoxiang အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ၌ လကျခံတှဆေုံ့စဉျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနေ့ နံနကျ ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတှငျး ARSA အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျမြားနှငျ့ ဖွဈစဉျဖွဈပှားမှု ၃၉ ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ ကွောငျး၊ တောငျဘဇာကြေးရှာ တှငျရှိသညျ့ တပျဌာနခြုပျတဈခုအား အငျအား ၅၀၀ ခနျ့ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အငျအားအနညျးငယျသာရှိသညျ့ ရဲကငျးစခနျး ၃၀ အား အငျအား ၁၀၀/၂၀၀ စသညျဖွငျ့လညျးကောငျး တဈပွိုငျတညျး အငျအားသုံး၍ စုစညျးတိုကျခိုကျခဲ့ခွငျးမှာ ကွိုတငျစီစဉျထားမှုကို ပျေါလှငျကွောငျး၊ ဖွဈစဉျအတှငျး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ ၀နျထမျးမြား၊ တပျမတျောသားမြားနှငျ့ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြားအား ဓား၊ လှံ၊ လကျပဈဗုံးနှငျ့ လကျနကျမြားဖွငျ့ ရကျစကျစှာထိုးခုတျသတျဖွတျခွငျး၊ တံတား ၈ စငျးအား မိုငျးထောငျဖောကျခှဲဖကျြစီးခွငျးနှငျ့ ကြေးရှာမြားကို မီးရှို့ခွငျးတို့မှာလညျး အကွမျးဖကျလုပျရပျမြားဖွဈသညျကို သကျသပွေနကွေောငျး၊ တပျဌာနခြုပျနှငျ့ ရဲစခနျးမြားကို တုတျ၊ ဓား၊ လှံ၊ ဂငျြကလိ၊ လကျလုပျသနေတျ၊ လကျပဈဗုံးမြားဖွငျ့ လူငယျ၊ လူရှယျ၊ ယောကျြားကလေးမြား လာရောကျတိုကျခိုကျခွငျးဖွဈသျောလညျး လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက လိုကျလံရှငျးလငျးရာတှငျ အခြို့နရောမြား၌ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ ကလေးငယျမြားကို လူသားဒိုငျးအဖွဈ အသုံးပွုသညျမြားကိုလညျးတှရှေိ့ရကွောငျး၊ သနေတျကိုငျ တပျဖှဲ့ဝငျမြားအား ဓား၊ လှံ၊ ဂငျြကလိမြားဖွငျ့ လူအငျအားသုံး၍ ဝိုငျးဝနျးတိုကျခိုကျခွငျး မှာလညျး မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲထားသညျဟု ယူဆနိုငျကွောငျး၊ ယငျးအကွမျးဖကျဖွဈစဉျမြားကို လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြား အနဖွေငျ့ အနညျးဆုံးသော လူအငျအား၊ ပဈအားဖွငျ့သာ ထိနျးသိမျးစလေကျြရှိကွောငျးဖွငျ့ ဖွဈစဉျအခွအေနမြေားအား ရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ H.E. Mr.Sun Guoxiang က တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားအား ရှုံ့ခကြွောငျး၊ ကဆြုံးသှားသော တပျမတျောသား၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ၀နျထမျးမြားအတှကျလညျး စိတျမကောငျးဖွဈရ ပါကွောငျး၊ တရုတျနိုငျငံအစိုးရအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျော၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ထိနျးသိမျးလုပျဆောငျမှုမြားကို ပွတျပွတျသားသား ထောကျခံသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စကိုလညျး ပွလေညျစှာဖွရှေငျးနိုငျမညျဟု အပွညျ့အဝယုံကွညျပါကွောငျး၊ မိတျဆှကေောငျး၊ အိမျနီးခငျြးကောငျးအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ အကြိုးစီးပှားနှငျ့ပတျသကျပွီး မွနျမာနိုငျငံဘကျမှရပျတညျ၍ နီးကပျစှာ ဆကျလကျပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ပွနျလညျပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး H.E. Mr.Sun Guoxiang က မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားတှငျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးအားလုံးပါဝငျလာစရေေးအတှကျ ၀ိုငျးဝနျးကွိုးပမျး လုပျဆောငျနမှေုအခွအေနမြေား၊ နှဈဦးနှဈဖကျ အခြိနျယူညှိနှိုငျးရေးဆှဲ ထားသညျ့ NCA သညျ ပွီးပွညျ့စုံသညျဟု မဆိုနိုငျသျောလညျး လကျရှိအခွအေနတှေငျ အကောငျးဆုံးဖွဈကွောငျးနှငျ့ NCA လကျမှတျရေးထိုးခွငျးဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံမွောကျပိုငျးတှငျလညျး တညျငွိမျအေးခမျြးမှုအတှကျ အာမခံခကျြရရှိနိုငျမညျ့အခွအေနမြေားအား ထညျ့သှငျးဆှေးနှေးသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွနျလညျဆှေးနှေးရာတှငျ ပွညျသူကတောငျးဆိုသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီစနဈ တညျငွိမျမှုရှိရနျလိုကွောငျး၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့လညျး ငွိမျးခမျြးရေးကို အမှနျတကယျရယူလို၍ NCA နှငျ့ပတျသကျပွီး အတတျနိုငျဆုံးလိုကျလြော၍ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျခဲ့ ကွောငျး၊ တပျမတျောက ခမြှတျခဲ့သညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးမူ ၆ ရပျမှာလညျး ငွိမျးခမျြးရေး အတှကျ ကွိုးပမျးလုပျဆောငျရာတှငျ မိမိတို့ကွုံတှရေ့သညျအရှိတရားနှငျ့ ပကတိလိုအပျခကျြမြားကွောငျ့ပငျဖွဈကွောငျး၊ အရေးကွီးသညျမှာ ကတိတညျခွငျးပငျဖွဈကွောငျး ပွနျလညျပွောကွား၍ ငွိမျးခမျြးရေးဖျေါဆောငျမှုလုပျငနျးစဉျမြား ဆကျလကျလုပျဆောငျ ရေးကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး H.E. Mr.Sun Guoxiang နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Hong Liang ၊ စဈသံမှူးနှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။ တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ H.E. Mr.Sun Guoxiang တို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖော်ဆောင်ရာ၌ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သာ လျှောက်လှမ်းရန်လို
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီခေတ်ကာလ ငြိမ်းချမ်းရေးစတင်ဖော်ဆောင်စဉ်ကပင် နိုင်ငံတော်၏ ပကတိလိုအပ်ချက် ဖြစ်သည့် တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးနှင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရန် အချက်နှစ်ချက်ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကမ်းလှမ်းချက်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ သဘောတူလက်ခံပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးပြီးမှ NCA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ဆောင်ရာ၌ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သာ လျှောက်လှမ်းရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့အာရှအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr.Sun Guoxiang အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်များနှင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှု ၃၉ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း၊ တောင်ဘဇာကျေးရွာ တွင်ရှိသည့် တပ်ဌာနချုပ်တစ်ခုအား အင်အား ၅၀၀ ခန့်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အင်အားအနည်းငယ်သာရှိသည့် ရဲကင်းစခန်း ၃၀ အား အင်အား ၁၀၀/၂၀၀ စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း တစ်ပြိုင်တည်း အင်အားသုံး၍ စုစည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ ကြိုတင်စီစဉ်ထားမှုကို ပေါ်လွင်ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်အတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ တပ်မတော်သားများနှင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား ဓား၊ လှံ၊ လက်ပစ်ဗုံးနှင့် လက်နက်များဖြင့် ရက်စက်စွာထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ တံတား ၈ စင်းအား မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖျက်စီးခြင်းနှင့် ကျေးရွာများကို မီးရှို့ခြင်းတို့မှာလည်း အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်ကို သက်သေပြနေကြောင်း၊ တပ်ဌာနချုပ်နှင့် ရဲစခန်းများကို တုတ်၊ ဓား၊ လှံ၊ ဂျင်ကလိ၊ လက်လုပ်သေနတ်၊ လက်ပစ်ဗုံးများဖြင့် လူငယ်၊ လူရွယ်၊ ယောက်ျားကလေးများ လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံရှင်းလင်းရာတွင် အချို့နေရာများ၌ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များကို လူသားဒိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်များကိုလည်းတွေ့ရှိရကြောင်း၊ သေနတ်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဓား၊ လှံ၊ ဂျင်ကလိများဖြင့် လူအင်အားသုံး၍ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်း မှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲထားသည်ဟု ယူဆနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် အနည်းဆုံးသော လူအင်အား၊ ပစ်အားဖြင့်သာ ထိန်းသိမ်းစေလျက်ရှိကြောင်းဖြင့် ဖြစ်စဉ်အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် H.E. Mr.Sun Guoxiang က တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအား ရှုံ့ချကြောင်း၊ ကျဆုံးသွားသော တပ်မတော်သား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၀န်ထမ်းများအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စကိုလည်း ပြေလည်စွာဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု အပြည့်အ၀ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်း၊ အိမ်နီးချင်းကောင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရပ်တည်၍ နီးကပ်စွာ ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး H.E. Mr.Sun Guoxiang က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်လာစေရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်နေမှုအခြေအနေများ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အချိန်ယူညှိနှိုင်းရေးဆွဲ ထားသည့် NCA သည် ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း လက်ရှိအခြေအနေတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်လည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက် အာမခံချက်ရရှိနိုင်မည့်အခြေအနေများအား ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာတွင် ပြည်သူကတောင်းဆိုသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ငြိမ်မှုရှိရန်လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်ရယူလို၍ NCA နှင့်ပတ်သက်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်လျော၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြောင်း၊ တပ်မတော်က ချမှတ်ခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးမူ ၆ ရပ်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် မိမိတို့ကြုံတွေ့ရသည်အရှိတရားနှင့် ပကတိလိုအပ်ချက်များကြောင့်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးကြီးသည်မှာ ကတိတည်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြား၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ရေးကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး H.E. Mr.Sun Guoxiang နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Hong Liang ၊ စစ်သံမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် H.E. Mr.Sun Guoxiang တို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။